Indlu yasehlotyeni kwindawo entle kufutshane nomlambo!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPer
I-cottage ithokomele kwaye ifanelekile kwiholide yokuphumla kunye neyobucala - ibekwe kwenye yezona ndawo zintle zendalo eDenmark.
Izibane zesibhakabhaka zibonelela ngokukhanya okuninzi kwikhitshi elisandula ukulungiswa, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala. Indawo yomlilo kwigumbi lokuhlala ikulungele ukuphumla xa ujonge ukutshona kwelanga.
Indlu yokuhlambela yahlaziywa ngo-2015 ngokufudumeza ngaphantsi kwaye i-terrace enkulu evulekileyo eyenziwe ngamaplanga ine-barbecue, ifenitshala yegadi, kunye ne-sunloungers ukonwabela ihlobo laseDanish.
I-cottage ifanelekile kwiintsapho ezinabantwana okanye ukuhamba ngothando, njengoko ibekwe ngasese ekupheleni kwendlela.
I-cottage ine-terrace enkulu eyenziwe ngamaplanga kwaye ibekwe kwibala elihle lendalo elinethuba elaneleyo lokubona imivundla, amaxhama kunye nama-pheasants.
Ikufuphi nolwandle lwase-Ulvshale kunye nehlathi elikhulu. Indawo ejikeleze i-Ulvshale ikhuselwe, kwaye kukho iindlela ezininzi eziphawulweyo zokuhamba kunye neziko lendalo. Ngaphaya koko, i-cottage ikufuphi neMøns Klint, yona ngokwayo ingamava kubantwana nakubantu abadala. Kummandla ongqonge iliwa likaMøn kukho iindlela ezilungileyo zokuhamba intaba kunye nobomi obuninzi beentaka.
Kukho iiduvethi kunye nemiqamelo, kodwa kufuneka uze nelinen yakho yebhedi, iitawuli, iitawuli zeti kunye namalaphu ezitya.
Kukho iWIFI kunye neTV endlini.
Kukho isilwanyana sasendle esityebileyo esijikeleze le cottage, ukuba unethamsanqa unokubona amaxhama kunye nexhama elifusi ngonyezi, ngakumbi kuhlala kufika i-pheasant okanye umvundla odlula emabaleni. Ukuba iintaka zinomdla omkhulu, kukwakho ithuba elihle lokubona amaxhalanga olwandle kunye nokuzalanisa iiperegrine falcons kunye neentaka ezifudukayo.
Idolophu yaseStege yimizuzu esi-8 yokuqhuba ukusuka kwindlwana kwaye inokuthenga okulungileyo, iikhefi kunye neeresityu.
Kufuphi nendlwana yiMøns Klint enentelekelelo. Iliwa likaMøn lizikhilomitha ezisi-7 ubude, liqulathe ukuya kuthi ga kwi-128 yeemitha ukuphakama kwediphozithi yetshokhwe, kwaye yasekwa ekupheleni kwexesha leCretaceous malunga. 75 yezigidi zeminyaka eyadlulayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Per